गुलियो कत्तिको मन पर्छ, सावधान ! यस्तो भयंकर रोग लाग्न सक्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more गुलियो कत्तिको मन पर्छ, सावधान ! यस्तो भयंकर रोग लाग्न सक्छ
असार २८ गते, २०७६ - २०:१२
हामी गलियो भने पछि मरिहत्ते गर्ने गछौं । तर गुलियो शरीरलाई आवश्यक पर्नुका साथ यसले निम्त्याउने डरलाग्दो असर बारे पनि हामीले उत्तिकै ख्यान गर्न जरुरी देखिएको छ । फ्रान्सका वैज्ञानिकका अनुसार फ्रुट जुस वा फिज्जी पोप जस्ता मिठा पेय पदार्थहरुबाट क्यान्सरको खतरा बढ्न सक्छ ।
यो बेलायतको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका आधारमा यस्तो धारणा सावैजनिक भएको हो । सरबन विश्वविद्यालयका टोलीले यसको कारण रगतमा सुगरको मात्रालाई लिएका छन् । हुनत यो अनुसन्धान पुरा गर्न अझै धेरै कामहरु बाँकी नै रहेको बताइएको छ । पाँच प्रतिशत भन्दा बढी चिनी जुन पेय पदार्थमा हुन्छ त्यस्ता पेय पदार्थ गुलिया पेय पदार्थमा पर्दछन् ।
अनुसन्धानमा हप्तामा दुई दिन १०० मिलिमिटर पेय पदार्थ भन्दा बढी पिउँदा क्यान्सर हुने १८ प्रतिसतसम्म आशंका बढ्ने बताइएको छ । यस अनुसन्धानमा सामेल हरेक एक हजार व्यक्तिहरुको समुहमा २२ क्यान्सरबाट पीडित पाइयो ।
क्यान्सर रिसर्च युकेका वरिष्ठ डा. ग्राहम ह्विलरले भनेका छन्, सुगर युक्त पेय पदार्थ र क्यान्सरबीच सम्बन्ध रहेको छ तर यसमा अझै धेरै अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।
असार २८ गते, २०७६ - २०:१२ मा प्रकाशित